U Adeega Bulshada, Soo Bandhigidda Minnesota Talent
Xarunta Xisaabta ee Farshaxanka
Xarunta Xisaabta ee Farshaxanka waa xarun farshaxan bulshadeed oo bixisa fursado loogu talagalay wax soosaarka farshaxanka, sahaminta hal-abuurka, waxbarashada farshaxanka, iyo raaxaysiga farshaxanka iyo madadaalada. Waxay ku taallaa taariikhihii taariikhiga ah, cusboonaysiinta Tiyaatarka Paramount ee xaafadda St. Cloud, Paramount wuxuu marxaladdiisa u fidiyaa kooxo badan oo bulshada ah, iyo sidoo kale muusikada dalxiisyada iyo kooxo dabiici ah.
Iyada oo taageero ka heleysa McKnight, Paramount waxay awood u yeelatey inay furto meel banaan oo lagu magacaabo "Gallery Saint Germain". Galitaankaan cusub wuxuu ka kooban yahay farshaxanada Minnesota kuwaas oo muujinaya heer aad u sarreeya oo xirfadeed. Galena Saint Germain waxay muujisay bandhigyo kala duwan tan iyo markii la furay, oo ay ku jiraan sahanka farshaxanka ee farshaxanka shaaha ee Bariga Aasiya, iyo xulaf jilicsan oo laga sameeyay dheriyaal kala duwan.
Craig Edwards ' Farshaxanka Tacliinta baadhay aqoonta Craig Edwards ay ku soo iibsatay safar ay ku tagtay East Asia si ay u bartaan farshaxanka shaah. Wuxuu wax ka bartay dheryihii loo isticmaali jiray xafladaha shaaha ee rasmiga ah iyo sidoo kale dhererka loo yaqaan 'jumladaha'. Hadafkiisa wuxuu ahaa inuu abuuro faham fiican oo ku saabsan qaabka farshaxanka. 42-kii sano ee la soo dhaafey Craig ayaa muujiyay inuu ka fariistay gawaarida maraakiibta quruxda badan ee dhuxusha oo uu gubtay dabka cusub ee New London Kiln.
Qaboojinta dhoobada wuxuu ahaa bandhiga gobolka ee dabiiciga ah. Farshaxanada ka soo jeeda Minnesota waxay soo bandhigeen qaybo dhoobo ah oo ay ku jiraan dheriga iyo farshaxanka. Agaasimaha Fulinta ee Northern Clay Sarah Millfelt ayaa tartanka ku jibiyay. Bandhigu wuxuu soo jiitay 18 farshaxan oo farshaxan oo aan caadi ahayn oo ka soo jeeda baraha sare ee aasaasiga ah oo matalaya shaqo aad u fiican. Noocyada kala duwan ee shaqadu waxay abuurtay khibrad gaar ah oo ku saabsan farshaxanada iyo sidoo kale dad badan oo soo booqda Galbeedka Germain.